संस्कृत र आयुर्वेद शिक्षाको केन्द्र - शिक्षा - साप्ताहिक
संस्कृत र आयुर्वेद शिक्षाको केन्द्र
बेलझुन्डीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई मध्यपश्चिमकै महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । बिजौरीस्थित जनता संस्कृत माविले मावि तहमा संस्कृत शिक्षा अध्यापन गराइरहेको छ भने जनता विद्यापीठले उच्च शिक्षा अध्यापन गराइरहेको छ । संस्कृतभित्र खगोल र ज्योतिष विद्याको विकासमा जोड दिइएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गत आयुर्वेद शिक्षा सबैभन्दा भरपर्दो र दिगो मानिएको छ ।
बिजौरीमै रहेको आयुर्वेद केन्द्रीय विद्यापीठमा आयुर्वेद चिकित्सक (कविराज) उत्पादन भैरहेका छन् । उक्त विद्यापीठमा बीएएमएससम्म पढाइ हुन्छ । जसमा हरेक बर्ष २१ जना आयुर्वेद चिकित्सक उत्पादन भैरहेको आयुर्वेद डिन प्रा. डा. सञ्जय पोखरेलले बताए । आयुर्वेदमा राम्रो भविष्य छ, यसप्रति आकर्षणसमेत बढिरहेको छ, डा. पोखरेल भन्छन्– दाङलाई आयुर्वेद शिक्षासँगै जडिबुटी उद्यान एवं औषधी उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । आयुर्वेद शिक्षामा आकर्षण र लगानी बढिरहेको डा. पोखरेलले बताए । आठौं तहको मेडिकल अफिसर, बीएएमएस पढाइ हुने कलेजमा अध्यापन, एमडी/एमएस/एमपिएच अध्ययन गर्न र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने अवसरहरू भएकाले आयुर्वेदमा सबैको आकर्षण बढेको डा. पोखरेल बताउँछन् ।
यसैगरी दाङमा प्राबिधिक शिक्षाप्रति पनि आकर्षण छ । लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा कृषि, पशु एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि विषय अध्यापन भैरहेको छ । निजी क्षेत्रमा पनि लमही, घोराही र तुलसीपुरमा कृषि विज्ञान पढाइ भैरहेको छ । यहाँ अनमी र नर्सिङ कलेजहरूको संंख्या वृद्धि भैरहेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार दाङमा ४ सय २१ सामुदायिक तथा २ सय २३ संस्थागत गरी ६ सय ४४ प्राविदेखि उच्च माविसम्मका विद्यालय छन् भने ३१ वटा क्याम्पस छन् ।
नेपालमा एउटा ठूलो धार्मिक क्रान्तिको सम्भावना देखिन्छ
अमेरिकामा नेपाली कला प्रदर्शन